Ngaba ungandibonisa ngethuluzi lokukhangela eliphezulu lase-Amazon kwixabiso?
Ngaphandle kwemveliso efunekayo ngokugqibeleleyo, akunakwenzeka ukuba uqale ukulawula loo ndawo yemakethi e-Amazon. Ndiyathetha ukuba imveliso ngokwayo kunye nokwahlula kwakho akunakunceda ukunqoba ukuncintisana kwe-cutthroat, ngaphandle kokuba uphathe ixabiso elijongene nexabiso kwaye uhlale ukulungele nawuphi na utshintsho okanye ulungiso lwezithuthi oluthathwa ngabaqhubi bakho, umzekelo xa uqhuba umkhankaso wokuphromotha kwezinye izinto ezishushu. Nanku apho uya kufuneka uncedo olukhethiweyo lwe-Amazon olulinganiswa ngokulandelelanayo ukulandelela intengo kwaye uhlala uhlaziywa kunye neengcebiso, kunye nezilumkiso kunye nezaziso. Nazi ezinye izixhobo ezintle kakhulu kunye nezikhokelo ze-intanethi ukujongana nombandela wexabiso lentlawulo ye-drop-shipping yebshop yakho kanye.
Yinto enhle kubo bonke abathengisi bee-ecommerce kunye neengcali zokuthengisa idijithali. Ingasetyenziselwa kwi-Amazon njengethuluzi lokukhangela uhlalutyo lwamaxabiso olunzulu kunye nokulungiswa kwexabiso lomkhiqizo. Ngokucacileyo, esi sixhobo senza izinto zibe lula - zinokukunceda ukuba ubonise umgaqo-nkqubo wexabiso elifanelekileyo ukuba ube nokuthengiswa kwempahla, kwaye ugcine umgama onempilo ngexesha elifanayo. I-Logic Logic ingaba isiseko esiqinileyo seendlela eziphambili ze-Amazon, ezifana neBhokisi lokuthenga, isikhundla, ukuthengisa, kunye neNkqubo yeNqanaba elifanayo ukubetha abachasi bakho abasondeleyo.
Elinye ithuluzi lokusesha le-Amazon ongayisebenzisa ukuhlalutya intengo ukudala iqhinga lakho elide lokusebenza ngendlela ephantse iqhutywa. Zixhobisa ngamaphetheni okuhlaziya ngokuzenzekelayo kwaye ulawulo lwendawo ekhuphisana kakhulu kwi-Amazon eneengcamango ezibalulekileyo malunga namaxabiso athengisayo. Kukho nendawo ekhethekileyo yokuphambana ne-Appeagle, njengoko esi sixhobo sinokuzuza ngokulinganayo kwezinye iimarike, ezifana neWalmart.
I-Keepa ixabiso elixhaswa ngumhlaba kunye nokulandelela ithuluzi, eliquka malunga namazwe ahlukeneyo. Phakathi kwezinye izinto eziphambili, ukukhangela kwe-Amazon kunye nesixhobo sokulandelela kubonakala kuncedo kakhulu ngokundinika ngamagrafu embali yamanani amanani, ukwehla kwexabiso okanye ukufumana izilumkiso, idatha epheleleyo ebhaliweyo ekhoyo kwisiphequluli sam, ukukhangela ngokukhawuleza iinkcukacha ezandul ' Iimpawu zentengo, kunye nokuhlalutya kwayo ngokulula kunye nokulungelelanisa nabathengisi abaphumeleleyo kwi-Amazon.
Le yithuba lokugqibela ndingathanda ukukubonisa namhlanje. I-RepricerIngxelo idibanisa i-automation eyona nto ibhetele yokuthengisa kuyo ukukukhonza kwi-Amazon njengethuluzi lokukhangela kunye ne-software yokuphucula intengo-konke kokunye. Ngokomxhasi, isisombululo esibanzi sisetyenziswe kuphela kwiinkcukacha zakutshanje ukukunceda uluhlu lwemveliso yakho ngokufika kwiBhokisi lokuthenga, kwaye lunakho ukuqhuba uluhlu lwemveliso yakho kwiBhokisi elincinane leeNqununu. Ndakufumana kuxhamla ukubetha ixabiso lentengiso yabamkeli bam ngexabiso elithile, yenza umxube wexabiso elikhawulezileyo kunye namathegi wamanani asandul 'nje amiselwe ngabadayisi abaphezulu kwi-Amazon, kunye nokwenza izinto zibe lula ngokukhuphela ngaphandle kwenjongo ethile kwimakethe ethile njengomqhubi .